अस्ट्रेलियामा टुरिस्ट भिसामा आएर काम गरे के हुन्छ ? - Himalayan Kangaroo
अस्ट्रेलियामा टुरिस्ट भिसामा आएर काम गरे के हुन्छ ?
Posted by Himalayan Kangaroo | ३ असार २०७२, बिहीबार ०१:१४ |
मेलबर्न । अस्ट्रेलिया जति समृद्ध छ, त्यति नै सुन्दर पनि । त्यसैले हरेकको चाहना हुन्छ, अस्ट्रेलिया घुम्नु । आकर्षक कमाइका कारण केहीको मन त्यही लोभिन पनि सक्छ । संसारकै सर्वाधिक महंगो देश मध्येमा पर्ने अस्ट्रेलियामा पर्यटकहरु ओइरिरहन्छन् ।
नेपालीहरुको पनि बाक्लिदो उपस्थितीसँगै पर्यटक भिसामा अस्ट्रेलियामा घुम्ने क्रम बढ्दो छ । त्यसैले अस्ट्रेलियन टुरिष्ट भिसामा के गर्न पाइन्छ ? के गर्न पाइदैंन त्यसको जानकारी पनि हुन आवश्यक छ ।
टुरिष्ट भिसामा अस्ट्रेलिया आएर काम गरेको थाहा भयो भने के कारबाही हुन्छ ?
अस्ट्रेलियाका कानूनविद संजीव पाण्डेका अनुसार टुरिष्ट भिसामा काम गर्ने अधिकार दिइएको हुँदैन । त्यसैले काम गर्नु भनेको भिसाका शर्तको उल्लंघन गर्नु हो । गैरकानुनी रूपमा काम गरेको भेटिएमा ३३ हजार डलरसम्म जरिवाना र दुई वर्षसम्म कैद सजाय हुन सक्छ । त्यस्तै रोजगारी दिने कम्पनीलाई ६६ हजार डलरसम्म जरिवाना हुनसक्छ ।
भिजिटर भिसा घुम्नको लागि, परिवारसँग भेटघाटका लागि र छोटो व्यवसायिक भ्रमण जस्तै व्यापार सम्झौता, गोष्ठी, तालिम आदिमा भाग लिन आउनका निम्ति दिइन्छ। यो भिषा तीन महिना, छ महिना वा बढीमा एक पटकमा लगातार एक वर्षसम्म बस्न मिल्ने गरी दिइन्छ। यस भिषामा रहेकाहरूले तीन महिनासम्मको कोर्स पढ्न पाउँछन्। तर त्योभन्दा लामो अवधिको पढाइका निम्ति भने विद्यार्थी भिषा वा अरू कुनै योग्य भिषा लिएको हुनुपर्दछ।
Previousमध्यरातमै १६ बूँदे सम्झौता गर्नुको रहस्य खुल्यो
Nextकोपा अमेरिकामा कोलम्बियासँग ब्राजिल पराजित
नेपाल फेष्टिबल अष्ट्रेलियामा आँचल शर्मा
१० आश्विन २०७५, बुधबार ०१:२९